Kubuyekezwe kokugcina ngomhla ka-Agasti 29, 2014
Lesi sigaba esiphezulu sifinyeza imigomo engezansi. Lesi sifinyezo sinikezwe ukusiza ukuqonda kwakho kwemigomo, kodwa qiniseka ukufunda lonke idokhumenti, ngoba uma uvumelana nalo, ukhombisa ukuthi uvumelana nayo yonke imigomo, hhayi lesi sifinyezo kuphela.
Amasevisi we-Firefox cloud ("Amasevisi") ayimfanela yamasevisi ahlinzekwa kuwe i-Mozilla.
Amasevisi anikezwa "njengoba anjalo" futhi abukho ubufakazi beqiniso banoma yiluphi uhlobo. Kunemikhawulo ebalulekile ekuzibophezeleni kwe-Firefox kunoma yikuphi ukulimala okuvela ekusebenziseni kwakho amasevisi.
Le Migomo Yesevisi ("Imigomo") ibusa ukusebenzisa kwakho amasevisi we-Firefox cloud, ukufaneleka kwamasevisi waku-inthanethi anikezwe i-Mozilla ("amasevisi").
Ukuze usebenzise amasevisi, uzodinga ukudala i-Akhawunti ye-Firefox. Phakathi nokubhalisa, uzocelwa ukuthi usethe iphasiwedi. Ubophezelekile ukugcina iphasiwedi yakho iyimfihlo futhi nakumsebenzi owenzekayo ku-akhawunti yakho ye-Firefox. I-Mozilla ayibophezelekile ekulimaleni okuvela ekusebenziseni okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho ye-Firefox.
Ukuvumelanisa kwe-Firefox kukuvumela ukuthi ufinyelele ulwazi olugcinwe ku-Firefox kuwo wonke amadivayisi, kufaka phakathi amathebhu wakho, ibha yokuhle, amaphasiwedi, amabhukhimakhi, nezintandokazi zesiphequluli. Unganika amandla futhi ukhubaze ukuvumelanisa kwe-Firefox kusigaba samathuluzi se-Firefox.
Ukuthola idivayisi yami kukuvumela ukuthi uthole ngesilawuli kude futhi ulawule ezinye izici zedivayisi ye-Firefox OS, njengokubuka izindawo zakamuva, ukusula okuqukethwe kwendawo, ukunika amandla ithoni yokukhala noma isikrini sokukhiya, noma ukubonisa umlayezo. Ukuze usebenzise leyo misebenzi, kufanele unike ukuthola idivayisi yami kuzilugiselelo zedivayisi yakho. Ukuthola idivayisi yami kuzosebenza noma ngabe izilungiselelo zomsindo nezendawo kuydivayisi yakho zithulile noma zivaliwe. Ungakhubaza lesi sici kuzilungiselelo kusilungiselelo sedivayisi yakho.
Uma idivayisi yakho ilahlekile, ungangena ku-https://find.firefox.com usebenzisa imininingwane yakho yokungena ye-akhawunti ye-Firefox ukubela nokulawula ukude idivayisi yakho. Indawo eseduzane yedivayisi yakho izobikwa kithi ngenkathi idivayisi ivuliwe futhi ixhumeke ku-inthanethi. Uma kusebenza, ubophezelekile kunoma yiziphi izindleko eziphathelene nokuthuthwa kwedatha. Uma ukholwa ukuthi idivayisi yakho itshontshiwe, kufanele uxhumane nezomthetho. Qaphela ngokwabelena ngolwazi ngoba imilayezo eboniswa kudivayisi yakho itholakala esidlangalaleni.
Isaziso Sobumfihlo Samasevisi we-Firefox Cloud sichaza imininingwane yokuthi sithola ini ekusebenziseni kwakho Amasevisi nokuthi silusebenzisa kanjalo lolo lwazi. Sisebenzisa ulwazi esilutholayo Kumasevisi njengoba kuchaziwe ku-Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Mozilla.
Okuqukethwe kwakho kumasevisi wethu
Ungalayisha okuqukethwe kwakho njengengxenye yezici zamasevisi. Ngokulayisha okuqukethwe kwakho, usinika ilayisensi lomhlaba wonke, elingakhethekile, elikhululekile ukusebenzisa okuqukethwe kwakho ngokuxhumana nokunikezwa kwamasevisi. Umela futhi uyavuma ukuthi okuqukethwe kwakho ngeke kwephule amalungelo wenkampani yangaphandle futhi uzothobelana nanoma imiphi imihlahlandlela yokuqukethwe ethulwa i-Mozilla.
Amalungelo Wempahla we-Mozilla
I-Mozilla ayikuniki amalungelo wempahla kumasevisi angacacisiwe kuleyo migomo. Isibonelo, leyo migomo ayinikezi ilungelo lokusebenzisa amalungelo we-Mozilla, amagama wohwebo, izimpawu zohwebo, omaki besevisi, amalogo, amagama wezizinda, noma ezinye izici zomkhiqizo. Amasevisi asatshalaliswe ngaphansi futhi akhonjelwa kwinguqulo yamanje Yelayisense Elisesidlangalaleni le-Mozilla.
Leyo migomo izoqhubeka nokusebenza ize ipheliswe nguwe noma i-Mozilla. Ungakhetha ukuyiphelisa noma kunini nganoma isiphi isizathu ngokukhubaza i-akhawunti yakho ye-Firefox nokunqamula ukusebenzisa kwakho amasevisi.
Singamisa noma sinqamule ukufinyelela kwakho kumasevisi nganoma isiphi isikhathi nganoma isiphi isizathu, kufaka phakathi, kodwa kukhawulelwe, uma sikholwa kahle: (i) ukuthi wephule leyo migomo, (ii) ukuthi udala ubungozi noma ukuvezwa kwezomthetho kithi; noma (iii) ukuthi ukunikeza kwethu kwamasevisi akusathengisi kahle. Sizozama ngamandla ukukwazisa ngekheli le-imeyili eliphathelene ne-akhawunti yakho ye-Firefox noma ngesikhathi esilandelayo uma uzama ukufinyelela amasevisi.
Kuzo zonke lezo zimo, leyo migomo izonqamula, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ilayisense yakho yokusebenzisa amasevisi, ngaphandle kokuthi izigaba ezilandelayo zizoqhubeka nokusebenza: Ukusindisa, Umshwana wokuzikhipha; Ukukhawulelwa kokubophezeleka, Ukuxubana.
Uyavuma ukuphephisa,ukuvikela nokubamba ngokuphephile i-Mozilla, osonkontileka bayo, ababambiqhaza bayo, bamalayisensi wabo, nozakwabo,nabaqondisi bayo, abasehhovisini, abasebenzi, nabasebenzeli ("Izinhlangano Ezivikelwa") kunoma yikuphi ukumangalela nezindleko zezinkampani zangaphandle, kufaka phakathi izindleko zabameli, ezivela ngaphandle noma ngokungahlobene ngokusebenzisa kwakho Amasevisi (kufaka phakathi, kodwa akukhawulelwe, kunoma yikuphi okuqukethwe okulayishwe nguwe).
Ukuzikhipha Emthwalweni; Umkhawulo Wesibopho Sezomthetho
AMASEVISI ANIKEZWA "NJENGOBA ANJALO" NAWO WONKE AMAPHUTHA. KUFIKA LAPHO KUVUNYELWE UMTHETHO, I-MOZILLA NEZINKAMPANI EZIVIKELWE ZIYAZIKHIPHA KUBO BONKE UBUFAKAZI BEQINISO, LAPHO KUVEZWA NOMA KUSETSHENZISWA, KUFAKA PHAKATHI NGAPHANDLE KOMKHAWULO UBUFAKAZI BEQINISO UKUTHI AMASEVISI AWANAWO AMAPHUTHA, AYATHENGISWA, ALUNGELE IZINHLOSO EZITHIZE, FUTHI AWAPHAZAMISI. UTHWALA BONKE UBUNGOZI NJENGOKUKHETHA AMASEVISI WEHLOSO YAKHO FUTHI NJENGEKHWALITHI NOKUSEBENZA KWAMASEVISI, KUFAKA PHAKATHI NGAPHANDLE KOMKHAWULO UBUNGOZI BEMVUME YAKHO BUPHULIWE NOMA BONAKELE NOMA UKUTHI OTHILE UFINYELELA I-AKHAWUNTI YAKHO. LO MKHAWULO UZOSEBENZA NGOKUNGAMELANI NOKWAHLULEKA KWENHLOSO EBALULEKILE YOKULUNGISA. ABANYE ABAMELI ABAVUMELI UKUKHISHWA NOMA UMKHAWULO WOBUFAKAZI OBUSETSHENZISIWE, NGAKHO-KE UMSHWANA WOKUZIKHIPHA UNGAHLE UNGASEBENZI KUWE.
NGAPHANDLE KOKUTHI KUDINGEKE NGOKWEZOMTHETHO, I-MOZILLA NEZINKAMPANI EZIVIKELWE NGEKE IBOPHEZELEKE EKULIMALENI OKUNGAQONDILE, OKUKHETHEKILE, KWENGOZI, KWEMIPHUMELA, NOMA NGOKWESIBONELO OKUVELA NGAPHANDLE KWENDLELA EPHATHELENE NALEYO MIGOMO NOMA UKUSEBENZISA OKUNGENAMANDLA UKUSEBENZISA AMASEVISI, KUFAKA PHAKATHI NGAPHANDLE KOMKHAWULO UKULIMALA OKUQONDILE NOKUNGAQONDILE KOKULAHLEKA OKUHLE, UKUMISA UKUSEBENZA, UKULAHLEKA KWEDATHA, NOKUNGAPHUMELELI KWEKHOMPYUTHA NOMA UKUNGASEBENZI KAHLE NGISHO NOMA KUYALIWE NGEZENZEKO ZOKULIMALA OKUNJALO NANGAPHANDLE KOKUFUNDA (INKONTILEKA, ISIFUNDO, NOMA NGENYE INDLELA) LAPHO UKUMANGALA OKUNJALO KUSUSELWE KHONA. UKUZIBOPHEZELA OKUQOQIWE KWE-MOZILLA NEZINHLANGANO EZIVIKELWE NGAPHANSI KWESIVUMELWANO NGEKE KUDLULE U-$500 (AMADOLA ANGAMAKHULU AMAHLANU). ABANYE ABAMELI ABAVUMELI UKUKHISHWA NOMA UMKHAWULO WOKULIMALA NGENGOZI, NGOMPHUMELA, NOMA OKUKHETHEKILE, NGAKHO-KE LOKHU KUZIKHIPHA NOMKHAWULO KUNGAHLE KUNGASEBENZI KUWE.
Ukushintsha kuleyo Migomo
I-Mozilla ingahle ibuyekeze le Migomo njalo ukwazisa isici esisha samasevisi noma ukucacisa ukunikezwa. Imigomo ebuyekeziwe izothunyelwa ku-inthanethi. Uma izinguquko zizinkulu, sizothula isibuyekezo ngamashaneli wethu avamile we-Mozilla ngalezo zethulo njengamaposi webhulogi nezinkundla. Ukusebenzisa kwakho ngokuqhubeka kwamasevisi ngemva kosuku lokuqalisa lwalezo zinguquko kuhlanganisa ukwamukela kwakho lezi zinguquko. Ukuze senze ukubuyeza kwakho kube lusizo, sizothumela usuku lokuqala ukusebenza phezulu ekhasini.
Leyo migomo ihlanganisa sonke isivumelwano phakathi kwakho ne-Mozilla kumasevisi futhi kubuswa imithetho yezwe lase-California, U.S.A., ngaphandle kokuphamba nokunikeziwe komthetho. Uma enye ingxenye yaleyo migomo ibanjwe ukuthi ayivumelekile noma ingaphoqelelwa, izingxenye ezisele zihlala zinjalo futhi ziyasebenza. Esimeni sokuphambana phakathi kwenguqulo ehumushiwe yale migomo nenguqulo yolimi lesiNgisi, inguqulo yolimi lesiNgisi izolawula.
Xhumana ne-Mozilla ku-
I-Mozilla Corporation Attn: Mozilla - Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041